Maninona no mivavaka - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Day-by-Day > Nahoana no mivavaka?
"Rehefa mivavaka ianareo, dia aza manambatra teny foana tahaka ny jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra. Ataon'izy ireo fa hohenoina izy, na dia be teny aza. Aza manao tahaka azy, fa fantatry ny rainareo izay ilainareo, ka manao izany izy. alohan’ny hanontanianareo azy” (Mat 6,7-8 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Nisy olona nanontany hoe: "Fa maninona aho no tokony hivavaka amin'Andriamanitra nefa fantany ny zava-drehetra?" I Jesosy dia nanao io teny etsy ambony io ho fampidirana ny Raintsika. Andriamanitra mahalala ny zava-drehetra. Na aiza na aiza no misy ny fanahiny. Raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra foana isika dia tsy midika izany fa tokony hihaino tsara kokoa izy. Ny vavaka dia tsy hoe manintona ny fiheveran'Andriamanitra. Efa ananantsika ny sainy. Fantatry ny dadanay ny momba antsika rehetra. Nilaza i Kristy fa fantany ny eritreritsika, ny filantsika ary ny faniriantsika.
Efa henonao ve ilay lehilahy nanontany namana kristiana hoe maninona no nivavaka izy? Azo inoana fa mahalala ny marina ny andriamanitrareo ary mety ny tsipiriany rehetra? Namaly ilay Kristianina hoe: Eny, mahalala azy izy. Saingy tsy fantatry ny famoahako ny marina sy ny fahitako ireo tsipiriany izy. Tian'Andriamanitra ny hevitsika sy ny fomba fihevitsika. Tiany ho anisan 'ny fiainantsika ary ny vavaka dia tafiditra ao anatin'izany fiahiana izany.